September | 2008 | Moep1's Blog
(နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd တို့ တာပိန်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အတွက် နှစ်ဖက်သဘောတူစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ (၂၅)ရက် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊ အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်မြင့်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မှ President, Mr. Wu Jing နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။ အစီအစဉ်အရ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက နှုတ်ခွှန်းဆက် စကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မှ President, Mr. Wu Jing က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည် ဖော်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မှ President တို့က နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြသည်။
ယင်းနေ့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးသော တာပိန်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှာ စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၆၀ ရှိမည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Comments Off on တာပိန်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ	| တာပိန်(၂) (Tarpain-2)	| Permalink
လျှပ်စစ်(၁) ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းအား ဧည့်သည်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံ
(နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ CITIC and Sinohydro Joint Venture CCYW ကုမ္ပဏီမှ President , Ms. Jean zhou Oin နှင့် Deputy Managing Director, Mr. Shen Decai နှင့် အဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ၍ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း၏ တာဘိုင်ဂျင်နရေတာနှင့် Hydraulic Steel Structure များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီး အကဲများ နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
Comments Off on လျှပ်စစ်(၁) ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းအား ဧည့်သည်အဖွဲ့ တွေ့ဆုံ	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
EP-1 Ministry, PRC Co discuss Yeywa hydropower project
(Nay Pyi Taw, 20 Sept, 2008)
Minister for Electric Power No-1 Col Zaw Min met with President Ms Jean Zhou Oin, Deputy Managing Director Mr Shen Decai and party of CITIC and Sinohydro Joint Venture CCYW Co from the People’s Republic of China at the meeting hall of the ministry here yesterday morning, At the meeting, they discussed the matters on turbine generator and Hydraulic Steel Structure of Yeywa hydro power project.
Also present on the occasion were Deputy Minister U Myo Myint, departmental heads and officials.
Comments Off on EP-1 Ministry, PRC Co discuss Yeywa hydropower project	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား ခေါမကျေးရွာ၌ ပေါင်းလောင်း နယ်မြေ တိုက်နယ်ဆေးရုံသစ် ဖွင့်လှစ်
(နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသော ရွှေတောင်အုပ်စု၊ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်ရွှေပြည် ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသည့် ပေါင်းလောင်းနယ်မြေ (၁၆)ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံသစ်ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့နံနက်(၈)နာရီတွင် နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား၊ ကျည်တောင်ကန် ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ခေါမကျေးရွာရှိ အဆိုပါ တိုက်နယ်ဆေးရုံသစ် မျက်နှာစာ၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါတိုက်နယ်ဆေးရုံသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင်၊ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန ၀န်ကြီး ဒေါက်တာကျော်မြင့်၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် နယ်မြေတာဝန်ခံ ဦးသိန်းဆွေ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ရွှေတောင်အုပ်စု၊ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ၊ မြန်ရွှေပြည်ကုမ္ပဏီတို့မှ ကုမ္ပဏီဥက္ကဌများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော် များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် နယ်မြေ တာဝန်ခံ ဦးသိန်းဆွေက တိုက်နယ်ဆေးရုံသစ် ဆိုင်းဘုတ်ကို စက်ခလုတ်နှိပ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး တိုင်းမှူး၊ ၀န်ကြီးများနှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီးများက အမွှေးနံ့သာများဖြင့်ပက်ဖျန်းပေးကြသည်။
ယင်းနောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဒေါက်တာကျော်မြင့်နှင့် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီဥက္ကဌ ဦးထွန်းမြင့်နိုင်တို့က တိုက်နယ် ဆေးရုံဖွင့်ပွဲမုခ်ဦးကို ဖဲကြိုးဖြတ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ယင်းနောက် ရွှေတောင်အုပ်စု အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဇော်နိုင်က တိုက်နယ်ဆေးရုံ အတွက် ဆေးရုံသုံး ခုတင်များ၊ ပရိဘောဂများ၊ ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရွက်စာတမ်းများကို လည်းကောင်း၊ မြန်ရွှေပြည်ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဝင်းက တိုက်နယ်ဆေးရုံ အဆောက်အဦးနှင့် စပ်လျဉ်းသော စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းကောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြသည်။ထို့နောက် တိုင်းမှူး၊ ၀န်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက တိုက်နယ် ဆေးရုံသစ်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြသည်။
ယနေ့ဖွင့်လှစ်သော ပေါင်းလောင်းနယ်မြေ တိုက်နယ်ဆေးရုံသစ်သည် ပေါင်းလောင်းရေအား လျှပ်စစ်စီမံက်ိန်းမှ ၀န်ထမ်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာ (၂၄)ရွာမှ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ (၁၆)ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလမှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မေလတွင် ဆောက်လုပ် ပြီးစီးကြောင်း သိရသည်။
Comments Off on နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား ခေါမကျေးရွာ၌ ပေါင်းလောင်း နယ်မြေ တိုက်နယ်ဆေးရုံသစ် ဖွင့်လှစ်	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
Comments Off on Paunglaung region facilitated with new station hospital	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ (Hydropower Stations under MOEP-1)
LeaveaComment »	| slide show	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for September, 2008.
Construction of Upper Yeywa Hydropower Project going on